အဂါင်္ နေ့ သားသမီး အတွက် တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း (တနလာင်္ သက်ရောက်)
သင် . . . ဒီနှစ်ပိုင်းမှာ ငွေကြေးတွေလည်း ဆုံးပါးတတ်သည်။ ဘယ်လိုအရသာရှိတဲ့ အစားအသောက်ကိုပဲ စားစား ခံတွင်းမတွေ့ဘဲ ဖြစ်နေတတ်တယ်။ အိမ်ကပစ္စည်းတွေ ချရောင်းရတဲ့အထိ ငွေပြတ်သွားတတ်တယ်။
အောက်လက်ငယ်သားတွေ တပည့်တပန်းတွေ သင့်ဆီက ထွက်သွားပြီး သင်နဲ့မတည့်တဲ့ လူဆီရောက်သွားတတ်ပါတယ်။
အလုပ်မှာ စိတ်မဝင်စားသလို ဖြစ်နေတတ်တယ်။ အလုပ်မှာ ပြဿနာပေါ်တတ်ပါတယ်။
မိမိအိမ်ခြေရင်းဘက်မှာ အသုဘပေါ်တတ်တယ်။ ပေါ်ရင်တော့ (၅) ဂဏန်းအစ ထီထိုးပေးပါ။ ထီဆုကြီး ပေါက်တတ်ပါတယ်။
ပြီးတော့ ဒီနှစ်မှာ နားရတယ်မရှိနိုင်ပါဘူး။ အလုပ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခု လုပ်နေရလို့ အလွန်ကို ပင်ပန်းတတ်ပါတယ်။
ဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲက အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေ ဆုံးပါးတတ်တယ်။
သူတစ်ပါးက စုန်းအတတ်၊ ပယောဂအတတ်တွေနဲ့ ကိုယ့်ကို မကောင်းကြံတတ်တယ်။
မိတ်ဆွေ . . . မမျှော်လင့်ဘဲ ဒီနှစ်ထဲမှာ အမှုအခင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဖြေရှင်းစရာ ပြဿနာတွေ ပေါ်တတ်တယ်။ မနာလိုတဲ့သူတွေ လုပ်လို့ လုပ်ငန်းတွေ ထိခိုက်တတ်ပါတယ်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ချင်း စိတ်ဝမ်းကွဲတာတွေ ကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်။ ကျန်းမာရေးလည်း ညံ့တတ်တယ်။
အငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ကာမဂုဏ်စိတ် ကုန်ခမ်းသွားတတ်တယ်။
အိမ်ထောင်ရှိရင်လည်း တကျက်ကျက် ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
သွားကိုက်သွားနာ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ မရောက်ဖူး မသွားဖူးသောခရီးကို ရုတ်တရက်သွားရတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကပေးစရာ ရှိတဲ့ငွေက ချက်ချင်းပေးရမယ်။ ရစရာရှိတဲ့ငွေကတော့ မရဘဲရှိလိမ့်မယ်။
ဒီနှစ်ဟာ ကံဇာတာညံ့တဲ့နှစ်လို့ ဆိုရပါမယ်။ တစ်ပတ်မှာ တစ်ကြိမ်လောက် စေတီတော်တစ်ဆူဆူသွားပြီး အဓိဋ္ဌာန်ပုတီးစိပ်ပါ။ ကောင်းတာကတော့ ဗုဒ္ဓေါဆိုတဲ့ ဂုဏ်တော်ကို စိပ်သင့်ပါတယ်။ အခါကြီးရက်ကြီးတွေမှာ သက်သတ်လွတ်စားပေးပါ။
စနေနေ့မနက် (၁၀) နာရီလောက်မှာ ဒံပေါက်တစ်ထုပ်ဝယ်ပြီး ဆွမ်းခံကြွတဲ့ ဘုန်းကြီးကို လောင်းလိုက်ပါ။ ရန်ကုန်မှာနေတဲ့ မိတ်ဆွေကတော့ ငှက်ပျောသီးကို ချွေပြီး မျောက်တွေကို ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်လာအောင် ပစ်ပေါက်၍ ကျွေးပါ။